Ny zavatra ilain'izao tontolo izao izao: ny Birao fizahan-tany momba ny fizahantany ao Shanghai
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Ny zavatra ilain'izao tontolo izao izao: ny Birao fizahan-tany momba ny fizahantany ao Shanghai
Mpanoratra Agha Iqrar
Ny praiminisitra Pakistan Imran Khan nandritra ny lahateniny tamin'ny Vovonana Shanghai Cooperation Organization (SCO) any Bishkek dia nanasongadina ny filàna paikady iraisana hampandrosoana ny fizahantany any amin'ny fanjakana mpikambana ao amin'ny SCO, toy ny Masoivohom-baovao DND tatitra. Ny fahitana azy dia manohana ny faniriana nandrasana hatry ny ela ireo mpandray anjara fizahan-tany ao Azia Afovoany ary koa ny Firenena Mikambana momba ny fizahantany manerantany (UNWTO). Ny fananganana ny SCO fizahan-tany SCO dia mety ho dingana voalohany amin'ny fanatratrarana tarigetra ho an'ny indostria fizahan-tany iraisana.
Ny SCO dia fikambanana iraisam-pirenena misy an'i China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, ary Uzbekistan ary wad natsangana tany Shanghai tamin'ny taona 2001. Niorina voalohany ho toy ny valan-dresaka fananganana fahatokisan-tena handrava ny sisintany, ny tanjon'ny fikambanana sy ny fandaharam-potoanany dia nanitatra mba hampidirina fitomboan'ny fiaraha-miasa amin'ny tafika sy fanoherana ny fampihorohoroana ary fizarana faharanitan-tsaina. Ny SCO koa dia nanamafy ny fifantohany amin'ny fandraisana andraikitra ara-toekarena isam-paritra toa ny fampidirina vao tsy ela akory izay ny fehin-kibo ara-toekarena vita amin'ny landy notarihin'i Shina sy ny Vondron-toekarena eropeanina tarihin'i Russia.
Pakistan sy India dia mpifanandrina roa ao amin'ny firenena mpikambana ao amin'ny SCO, noho izany, nofinofy fotsiny ny fieritreretana ny paikady visa iraisan'ny mpifanandrina amin'ny arabo fa azo eritreretina amin'ny fananganana SCOTB (SCO Tourism Board) izay mety hanome fotoana ho an'ny firenena roa tonta mahatsapa ny tombotsoan'ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany.
Miala amin'i Pakistan sy India, firenena hafa SCO dia afaka miroso amin'ny paikady iraisana hampiroboroboana ny fizahantany any amin'ny fanjakana mpikambana ao amin'ny SCO, ary misy ny fahafahan'ny Pakistan sy India amin'ny ho avy mahatakatra ny tombotsoan'ny tetikady iraisan'ny fizahan-tany.
Inoana fa amin'ny dingana voalohany, ireo Repoblika Azia Afovoany, ireo izay mpikambana ao amin'ny SCO (Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan) miaraka amin'i Russia sy Shina dia afaka mandroso eo ambany fijerin'ny praiminisitra Pakistan Imran Khan ho fizahan-tany iraisana. tetik'ady.
Ny fanjakana Azia afovoany dia iray amin'ny toerana mety indrindra fizahan-tany eto amin'izao tontolo izao, ary nilalao tsara teo amin'ny sehatry ny fizahan-tany izy ireo tao anatin'ny 2 taona lasa taorian'ny fahaleovan-tena tamin'ny Russia Sovietika teo aloha.
Ireo firenena ireo dia manana ny zavatra rehetra atolotra ao anatin'izany ny tontolo iainana, hatsaran-tarehy voajanahary, olona tia mandray olona sy sariaka, serivisy sy fotodrafitrasa tsara. Ny sakana amin'ny fampivoarana ny fizahan-tany any amin'ity faritra ity dia ny tsy fisian'ny fifandraisana matanjaka eo amin'ireo tompon'andraikitra fizahan-tany amin'ireo firenena rehetra ireo sy ny fitondrana visa mahafinaritra.
Ny mpizahatany iraisam-pirenena dia miatrika olana lehibe rehefa maniry ny hiampita ny sisin-tany manomboka amin'ny Repoblika Azia afovoany mankany amin'ny fanjakana Azia afovoany (ohatra avy any Tajikistan ka hatrany Uzbekistan na Kyrgyzstan). fizahan-tany ary ampitomboina ny vola miditra amin'ny fizahan-tany. Azo atao izany raha misy fifandraisana matanjaka eo amin'ireo minisiteran'ny fizahantany amin'ireo firenena rehetra ireo. Ilaina ny paikady iraisan'ny fizahan-tany iraisan'ny rehetra, izay natolotry ny praiminisitra Pakistan Imran Khan, ary avy eo afaka mandroso mankany amin'ny SCO fizahan-tany SCO misy ny manampahefana fizahan-tany amin'ny fanjakana mpikambana SCO rehetra. Ny birao toy izany dia hanana andraikitra tsara ihany koa amin'ny fifandraisana am-pirahalahiana amin'ireo firenena rehetra ireo amin'ny ho avy.
Ny fizahantany dia iray amin'ireo fitaovana mahomby indrindra amin'ny famoronana fidiram-bola ary fametrahana filaminana izay azo tanterahina. Ny fizahantany dia tokony hoheverina ho tsy mpamatsy vola fotsiny fa mpampihavana sy mpampihavana.
Ny olana eo amin'ny tsenan'ny fizahantany Azia atsimo dia ny Indo-Pakistan ny fifandraisana ratsy ary ny laharam-pahamehan'ny governemanta dia mifanohitra amin'ny filan'ny indostrian'ny fizahantany.
Any Azia atsimo, ny governemanta Pakistan, India, Sri Lanka, Nepal, ary Afghanistan dia samy manana ady ara-politika sy ara-diplaomatika ary izany no antony voalohany mahatonga ny Fikambanan'ny faritra Azia atsimo ho an'ny fiaraha-miasa isam-paritra (SAARC) tsy hametraka fifandraisana sy tambajotra matanjaka. eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany, satria ny SAARC dia tsy nametraka birao fizahantany hiatrehana io olana io.
Ny drafitra làlan'ny landy UNWTO dia tsy azo tanterahina raha ny fanjakana mpikambana ao amin'ny SCO eo amin'ny sehatry ny governemanta, ary koa ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana sy ny mpiray tsikombakomba, dia mifanome tanana amin'ny tanjona iraisan'ny fampivoarana ny tobin'ny fizahantany any amin'ny faritra.
Rosia hampiditra e-visa fidirana tokana ho an'ireo mpizahatany vahiny amin'ny 2021
Hotely Accor: Fivoarana manerantany amin'ny sehatry ny rendrarendra